Okusajingijolo jacket njengesifanekiselo yizinto zesikhathi esidlule
Yini ehlukanisa entsha inkathi Russian 90 evela kusomabhizinisi Russian bezinsuku zethu? Dweba afanayo associative. Into yokuqala efika emqondweni: amateki EPHATHEKAYO obujwayelekile, obukhulu igolide amaketanga neziphambano esifubeni sakhe, zemali, imishini ukukhiqizwa basekhaya labo are ampofu, kanye black car angaphandle ngoba abacebile yangempela. Kodwa okubaluleke kakhulu - a jackets njengegazi. Kuphela ngale ndlela Nouveau bellied futhi Bald Riche lungafani nsé njengoba kufanele isimo sabo.
Yebo, ngaleso sikhathi, ibhantshi njengegazi ngempela isici sobuntu yizinto zesikhathi esidlule imibhoshongo zezimali, yomsebenzi omkhulu mafia isiRashiya, ukuthuthukiswa emakethe yokuhweba, adikile ukucwaninga kuthelevishini nabezindaba, ukwehla kwezinga lokuphila labantu isilinganiso nokwanda ngomzimba, ukuba umlutha wotshwala, ukuluthwa yizidakamizwa ... Yebo, kwaba 90 yethu. Kodwa emuva isitayela esisha Russian futhi.
Okusajingijolo jacket hhayi ngephutha uvele emashalofini ezitolo futhi boutiques ezibizayo yenhloko-dolobha. Ngokwalokho okuvezwa umlando, ekuqaleni kwawo-90, okungukuthi ngo-1992 Indlu fashion Versace kuye kwabonisa umhlaba iqoqo elisha, i-main focus okwakunzima jackets njengegazi. Nouveaux ingcebo, Wayengazange amlandele izitayela fashion futhi akazange abe ephaketheni lakhe imali eningi, sanquma ukuthi isimo kufanele kugcizelelwe indlela acacile nangenakulibaleka. Ngakho, labo abangababiziweyo acebile, wathenga Versace yokuqala, luthela osomabhizinisi kanye izigcwelegcwele sasaneliswa nozakwabo Chinese. Ngakho jacket njengegazi kwaba iyunifomu entsha Russian. Abaklami ezwe elaliyi-Union republic (Slava Zaitsev, isibonelo), futhi wasebenza ukuze kuzuze izigebengu, ukuthunga nokuningi onobuhle entsha izingubo.
I umphelelisi isithombe bandyugany yakho entsha ye-90? Ikakhulukazi onesibindi futhi benesibindi akesabi sihlanganise jacket njengegazi, ibhulukwe sporty kusukela "Adidas" futhi izicathulo zakudala eyenziwe lesikhumba yokufakelwa. Labo ababesondelene elite ungavumeli bona esiphehla ibhulukwe iphathwa futhi omnyama, kodwa ungalokothi ukhohlwe mayelana ubucwebe igolide futhi indoda esikhwameni.
Ngokuvamile, ibhantshi kuphela iwuphawu kwenkathi, kodwa eqinisweni isitayela ukuphila futhi 90s entsha Russian ekuseni ungakhuluma eziningi. Ngokwesibonelo, konke bakha indlu efanayo ngezitini ezibomvu, efana sivala. Kusakhiwa efana izakhiwo yezakhiwo zingatholakala edolobhaneni iholidi eduze kwedolobha. Lapho uthenga imoto, Nouveau kakhulu umcabango Riche akazange abonise. Njengomthetho, abafana ocebile wathenga yena iMercedes 600 th imodeli, BMW "Grand Cherokee" noma plain Vaz-21099 ubudala.
Ukubuyela imfashini, kuyafaneleka ukusho ukuthi, ngenxa izenzakalo zezombusazwe owaziwa, i- "Lensimbi" lavulwa ngo lizwe ziye ngenkuthalo ekungeniseni izimpahla ezishibhile eliphansi kusuka Turkey neChina. Ehahela novelties ezigebengu nomkabo ngenkuthalo ukuthola izinto nemfashini futhi zazibhekwa njengokuphela ngu izishayamthetho isitayela Zonke Russia. Inkantolo izicathulo izithende mncane, umjuluko ibhulukwe kusuka ezihlukahlukene izindwangu zokwenziwa, jeans Varenkov izinkampani emhlabeni ongaziwa nokuningi. Ngaphandle yini enye ezimakethe kanye izitolo babe amathoyizi zezingane kusuka China, American ukudla okungenamsoco (futhi lapho namanje ethandwa) nokunye okuningi, njengoba kunjalo nanamuhla sonke ukukhumbula nabanye ezidlule.
Yiqiniso, ibhantshi njengegazi manje zingathengwa yimuphi umnyango imfashini (okuhle, fashion cyclical), kodwa wangaleyo nkathi ngeke babuyele kulo. 90 wahlala emlandweni.
Kuyini imfashini lokhu kuwa? Sifunda!
Academy of Fashion nesitayela Anny Arsenevoy: ukuqeqeshwa, ukubuyekezwa
Epic "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi": ukuhlaziya, kuvetwa kwebalingisi nencazelo izinhlamvu
Siqoqa ukupheka zokupheka. Ukubhaka ekhaya: funda ukupheka izandla zabo
Yini metal kungcono? Ukucaciswa, amanani, ukubuyekezwa
Nomkhuhlane wezingulube. Isingeniso efomini zakudala lesi sifo
"Bar" on Bauman: incazelo, ikheli, ukubuyekezwa
Amahlumela asehlobo, amamodeli webuhle obuhle